IHawaii Yazisa iziKhokelo eziTsha zabahambi baMazwe ngaMazwe
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba Eziphambili zaseHawaii » IHawaii Yazisa iziKhokelo eziTsha zabahambi baMazwe ngaMazwe
uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba Eziphambili zaseHawaii • HITA • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
IiMfuno eziNtsha zokuHamba zaMazwe ngaMazwe eHawaii
Namhlanje iRhuluneli yaseHawaii u-Ige ubhengeze iimfuno ezintsha zohambo lwamazwe aphesheya kunye nokunciphisa umthamo omtsha kwindawo apho abantu bahlanganisana khona. Yatsho iRhuluneli.
IHawaii ngoku ilandela iimfuno zomdibaniso kubakhweli bamazwe ngamazwe abahamba ngokuthe ngqo kwi Aloha Isizwe.
Ezi mfuno zintsha ziya kuqalisa ukusebenza ukususela nge-8 kaNovemba 2021.
Uhambo lwasekhaya, inkqubo yeHawaii Safe Travels iya kuhlala ikhona, kwaye abahambi bamazwe ngamazwe abangena kwelinye ilizwe, baya kuphathwa njengabagibeli basekhaya.
Kwiveki ephelileyo, urhulumente wobumbano ubhengeze iimfuno ezintsha zabakhenkethi bamazwe aphesheya abangena eUnited States.
Ukusukela nge-8 kaNovemba, ugonyo kunye neemfuno zovavanyo ziya kubakho kubo bonke abahambi abangena eUnited States. Ngenxa yoko, iLizwe laseHawaii liya kuhambelana neemfuno zomdibaniso zokungena eUnited States kubakhweli bamazwe ngamazwe abahamba ngokuthe ngqo eHawaii ukususela nge-8 kaNovemba.
INkqubo yokuHamba ngokuKhuselekileyo yaseHawaii iya kuhlala ikhona kuhambo lwasekhaya. Abahambi bamazwe ngamazwe abangena kweli lizwe kwenye indawo kwaye baya kudlulela eHawaii baya kuphathwa njengabakhweli basekhaya ngeenjongo zenkqubo ye-Safe Travels Hawaii, okuthetha ukuba kufuneka bathobele iimfuno zenkqubo yethu. Ngoko ke kufuneka bagonywe okanye babe novavanyo lwe-PCR olunegative.
IRhuluneli ikwabhengeze ukuncitshiswa kwamanye amanyathelo okunciphisa i-COVID-19. U-Ige usayine uMyalelo weSigqeba namhlanje ukuba alungise imida yelizwe lonke kwiindibano zentlalo, iiresityu, iibhari, iindawo zentlalontle, kunye neendawo zokuzivocavoca. Njengesikhumbuzo, imisebenzi yangaphakathi kwiivenkile zokutyela, iibhari, kunye neendawo zentlalontle kufuneka iqhubeke ifuna abaxhasi bahlale behleli kunye neqela labo, bagcine iinyawo ezi-6 zokude phakathi kwamaqela, bangaxubani, kwaye banxibe imaski ngalo lonke ixesha ngaphandle kwaxa besitya okanye besela.
Isebenza ngoNovemba 12, iinguqulelo ezimbini ziya kusebenza ngokumalunga nomsebenzi wangaphandle nangaphakathi.
Umsebenzi wangaphandle kwiindawo zokutyela, iibhari, kunye neendawo zentlalo azisayi kuba phantsi kwezi zithintelo.
Ngokumalunga nomthamo wemisebenzi yangaphakathi esemngciphekweni omkhulu, njengeendawo zokutyela, iibhari, kunye neendawo zokuhlala, umthamo wangaphakathi ubekwe kwi-50% ngaphandle kokuba iNqila iphumeza umgaqo-nkqubo ofuna ugonyo okanye iziphumo zovavanyo olubi lwe-COVID-19 kwiiyure ezingama-48, apho ayiyi kuba yimida yomthamo. Oku kubandakanya iindawo zokuzivocavoca, iibhari, iindawo zokutyela kunye neendawo zentlalontle.
Ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga nenkqubo yoHambo oluKhuselekileyo lwaseHawaii, ndwendwela iwebhusayithi.